INdebe YoMhlaba isimamise umnotho waseJapan - Bayede News
Ubebathanda abantu enza okungale uGwala
INdebe YoMhlaba yombhoxo sekungumlando ukuthi ibisingethwe iJapan, njengoba sekuphelile ngayo. Lo mqhudelwano omkhulu ugcine unqotshwe iNingizimu Afrika.
Yize abantu bebejabula ngendlela obusengethwe ngayo, nangendlela amaqembu adlale ngayo ezinkundleni. Iqiniso kodwa lithi iJapan iyona ejabule kakhulu njengoba ukusingatha kwayo lo mqhudlelwano kwenze umnotho wayo wakhuphuka.
Indlela umnotho olethwe iNdebe YoMhlaba ucacisile ukuthi kungani kuba umbango omkhulu uma kumele kumenyezelwe iqembu elizoyisingatha,.
IJapan isingatha lo mqhudelwano nje bekungokokuqala ukuthi izwe lasezwenikazi i-Asia ukuthi lisingathe lo mqhudelwano.
Ngokwesitatimende esakhishwa iJapan ngoNdasa ngonyaka wezi- 2018 bebelindele ukuthi benze imali elinganiselwa kwizigidigidi ezama-216 ngokwemali yakhona iYen, kodwa esitatimendeni esiphume emva kweNdebe YoMhlaba lelizwe lenze imali eyizigidigidi ezama-437 ngokwemali yakhona (iYen). Lokho kusho ukuthi benze inzuzo ephindaphindiwe kunaleyo abebeyilindele.
Okwenze yenza inzuzo engaka ingoba bekunamalandeli abayizinkulungwane ezama-400 abebeqhamuka emazweni ahlukahlukene. Abanye bahlale eJapan izinsuku ezingama-44 okuyinsuku okudlalwe ngazo lo mqhudelwano. Okunye ukuthi amathikithi athengiwe ukubuka lemidlalo abe yizigidi ezi-1,84.
Ngokufika kwabalandeli abayizinkulungwane ezama-400 kwenza iJapan yangenelwa yizigidigi ezi-105 ngokwemali yakhona iYen. Lapho kubalwa izinqalazisinda nezokuthutha
Phezu kwakho konke lo mqhudelwano uveze amathuba omsebenzi kubantu abalinganiselwa kwizinkulungwane ezingama-25.
IJapan yenze yaba nodumela kwezemidlalo kwazise yaziwa ngezinto ezingahlangene nezo, yaziwa kakhulu ngezobuchwepheshe, ukuzamazama komhlaba kanye nomkhalambazo.
Abantu bebengama-99,3 wamaphesenti akade bebuka bukhoma yonke imidlalo, kusho ukuthi kusale kancane ethengwe wonke amathikithi.
Okuwububufakazi bokuthi iJapan ukusingatha kwayo iNdebe YoMhlaba kuyiqophele umlando ingoba iphule irekhodi lokuthi ibukwe abantu abayizigidi ezingama-54,8 abantu abebebukela kuthelevishini. Iphinde yabukwa abantu abayizigidigidi ezi-1,7 ngokwevidiyo yobuchwepheshe besimanje.
Babayizinkulungwane ezingama-70 103 abantu ababukela bukhoma umdlalo wamanqamu, owawubanjelwe eYokohama International Stadium okuyinkundla elayisha abantu abayizinkulungwane ezingama-72 327.
Ngasohlangothini lwaMaBhokobhoko ukunqoba kwawo lo mqhudelwano kuzosiza ekuthuthukiseni umnotho wezwe njengoba amazwe aminingi ezohambela iNingizimu Afrika azodlala nompetha bomhlaba ngonyaka ozayo. La mazwe azofika nabalandeli abangazogcina ngokubuka imidlalo kodwa bazohambela izindawo zokuvakasha zakuleli.
Lokhu kuzokhulisa umnotho kwezokuvakasha. ENingizimu Afrika ezokuvakasha zifaka izigidigidi ezilinganiselwa kwezingama-136 kuGross Domestic Product (GDP).
Kusukela kusasa leli qembu eliholwa uSiya Kolisi lizohambela izindawo zonke zalapha eNingizimu Afrika litshengisa abalandeli indebe elibuye nayo eJapan. Ukuba khona kweNdebe YoMhlaba ezweni elithize kusimamisa umnotho walo, kufake nokudla ezingqokweni zamadoda. IJapan ebisingethe iNdebe YoMhlaba yombhoxo kusukela mhla zingama-20 kuMfumfu kuze kube mhla zimbili kuLwezi nonyaka, ingowofakazi balokho.
IJapan isingatha lo mqhudelwano nje bekungokokuqala ukuthi izwe lasezwenikazi i-Asia ukuthi lisingathe lo mqhudelwano. Ukusingatha iNdebe YoMhlaba kweJapan kuyenze yaba semehlweni omhlaba njengoba yaziwa ngezinto ezingahlangene nezemidlalo, yaziwa kakhulu ngezobuchwepheshe, ukuzamazama komhlaba kanye nomkhalambazo.
nguQhelani Msweli Nov 7, 2019